ZESA Yotatarika Kutenga Magetsi kuMozambique neSouth Africa
Mbudzi 21, 2016
Mukuru wekambani yeZESA VaJosh Chifamba vakaudza dare reparamende nemusi weMuvhuro kuti munyika munogona kushaikwa magetsi sezvo kambani yavo iri kutadza kubhadhara mari yemagetsi avanotenga kubva kuSouth Africa neMozambique.
Vati vari kupihwa miriyoni nechidimbu chemadhora pasvondo asi ivo vachida mamiriryoni mashanu pasvondo rega rega.
VaChifamba vatiwo chikwereti cheZESA gore rino chiri kutarisirwa kusvika pamamiriyoni mazana maviri nemakumi maviri nemana US$224 million kubva pamamiriyoni zana negumi nemaviri US$112 million gore rapera.
VaChifamba vaudza nhengo dzekomiti yeparamende inoona nezvemhando dzemoto nezvicherwa kuti bhanga reReserve Bank harisi kuvapa mari yavanoda kuti vakwanise kubhadhara magetsi ekunze nekuda kwedambudziko remari riri munyika.
Vati kana izvi zvikaramba zvichiitika makambani emagetsi eEskom yekuSouth Africa ne Hydro Cahora Bassa yekuMozambique anogona kumira kuunza magetsi munyika izvi zvinozokonzera dambudziko rekushaikwa kwemagetsi.
Zesa inotenga magetsi emamiriyoni maviri nechidumbu kubva kuMozambaque ne magetsi emamiriyoni gumi nechidumbu kubva kuEskom pamwedzi wega wega.
VaChifamba vanoti ZESA iri kutaura nemamwe makambani anotengesa zvinhu kunze kuti vabatsirwe nemari yekubhadhara magetsi kubva kunze kwenyika.
Vatiwo ZESA ichawedzera huwandu hwemagetsi ainotenga kuDema Emergency Power Plant kana Eskom neHCB dzikamira kuunza magetsi kuZimbabwe.
Asi nhengo dzekomiti iyi dzakaita saVaMasango Matambanadzo veZanu-PF vanomirira Kwekwe Central dzinoti magetsi ekuDema anodhura zvakanyanya.
ZESA inoshandisa mamiriyoni manomwe nechidimbu kutenga magetsi kubva kuDema pamwedzi.
VaChifamba vatiwo kambani yavo iri kuvandudza zvigayo zvayo zvemagetsi pamwe nekuvaka mamwe magwenya kuti nyika iwane magetsi akakwana. VaChifamba nevamwe vakuru vakuru vekambani iyi vatiwo havasi kufara nenyaya yekuti mamwe makambani akapihwa basa rekuvaka magwenya emagetsi haasi kuita basa sezvavange vakatarisirwa.
Vapa semuenzaniso kambani yeIntratek yamuzvina bhizimisi Wicknell Chivhayo iyo yakapihwa basa rekuvaka gwenya remagetsi anoshandisa zuva kuGwanda.
Mune imwewo nyaya, nhengo dzekomiti iyi dzabvunzurudza VaChifamba nezvenyaya yekuti ZESA yakapa kambani yeFruitful Communications basa rekushambadza mabasa ayo kunyange hazvo iyo iine chikamu chekuburitswa kwemashoko.
VaChifamba vabvuma kuti kambani iyi inove yenhengo yeparamende, VaPsychology Maziwisa, yainge yapihwa basa zvisina mwero uye vakaimisa basa apo vakazviziva. Nhengo yeparamende yeMDC-T VaProsper Mutseyami vati izvi zvinoratidza kuti muZESA mune huwori.
Sachigaro wekomiti iyi Dr Daniel Shumba vakururudzira VaChifamba kuti vaone kuti mari yakapihwa kambani yeFruitfull Communications yadzorwa sezvo kambani iyi yakapihwa basa kuZESA zviri kunze kwemutemo.
Kambani iyi yainge yapihwa zviuru makumi mashanu zvemadhora apo zvakabuda pachena kuti yainge yapihwa basa zviri kunze kwemutemo.